Nang Ei Ei Mon – How She Did It
Author: Nang Ei Ei Mon
Social Media Manager ….
Posted December 16, 2020 Nang Ei Ei MonLeaveacommentPosted in Uncategorized
👉Social media manager ဆိုတာဘာလဲ ဒီဖက်ခေတ်မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုပြီး စီးပွားရေးကိုအပြိုင်အဆိုင်လုပ်လာနေကြပါပြီ။ online အသုံးပြုတာက ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ထိရောက်မှုရှိတာကတစ်ကြောင်း တစ်နေရာတည်းမဟုတ်ဘဲ တစ်မြို့လုံး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးအထိပါ ဖြန့်ကျက်ပြီး ကိုယ့်ပစ္စည်း၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ပိုပြီးလူသိများစေလို့ အရမ်းကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။ Social media channels တွေဖြစ်တဲ့ facebook, Instagram, LinkedIn, website တွေကတဆင့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းအခြေအနေ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် Content များ၊ video များ၊ post များကို စီမံ ဖန်တီးဖို့အတွက် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပေးရသူများကို social media manager လို့ခေါ်ပါတယ်။ Social media manager တွေက ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ […]
ရုံးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချင်သူတွေ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပါ။ Virtual assistant ဆိုတာတကယ်တော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အရေးပါတဲ့ position တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Online ပေါ်က personal assistant ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ virtual assistant ရဲ့ အလုပ်တွေကိုပြောပြပေးမယ်နော်။ Virtual assistant ကဘာတွေလုပ်ရလဲ? လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ virtual assistant တစ်ယောက်တော့ရှိသင့်တယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Virtual Assistant တွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ လည်း ရှိကြပြီး Online Business တွေနဲ့အပြိုင်ခေတ်စားလာတာပါ။ Online ပေါ်ကနေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊မန်‌နေဂျာ တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ရုံးလုပ်ငန်းအပြင် တခြားအသေးစိတ် ကိစ္စတွေကိုပါ စီမံခန့်ခွဲပေးနေကြသူတွေပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုရှေ့ဆက်ပြီး ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ […]
Sale assistant ဆိုတာ
👉Sale assistant ဆိုတာဘာလဲ? Sale ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ အားလုံးနဲ့ရင်နှီးပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်။ ဈေးရောင်းတာပေါ့နော်။ ဒါဆို sale assistant ဆိုအရောင်းဝန်ထမ်းပေါ့။ ပြိင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ဒီဖက် ၂၁ရာစုခေတ်မှာ ဈေးရောင်းတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကို လူတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လာနေကြပါပြီ။ ဈေးရောင်းတယ်ဆိုတာလွယ်ကူတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းရေရှည်ဖောက်သည်တည်မြဲဖို့နဲ့ ရောင်းအားတွေကျမသွားဖို့တော့ အရောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ နည်းစနစ်အသစ်တွေ ပညာတွေက ပိုမိုတိုးတက်လို့လာနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းတွေ၊ အရောင်းဆိုင်တွေက အရောင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ မန်နေဂျာတွေကို လစာကောင်းကောင်းပေးပြီး ခန့်လာနေကြပါပြီ။ ဈေးရောင်းတယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကို သေချာနာလည်းတတ်ဖို့အပြင် ကာစတန်မာကဘာ‌တွေလိုအပ်တယ်၊ အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရမယ်၊ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုသိထားမှ sale assistant ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။ 👉 Sale assistant တွေက ဘာတွေလုပ်ပေးရမှာလဲ ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ အောက်မှာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ ✓သတ်မှတ်ထားတဲ့ရောင်းအားကို ပြည့်မီအောင် လိုက်နာကြိုးစားပေးခြင်း။ […]
Graphic Designer ….